Soo dejisan RKill 2.9.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: RKill
RKill – software ah in la ogaado oo la joojiyo nidaamka shaqada ee furin ah. RKill si toos ah disables fulinta geedi socodka, kaas oo joogsaneyso socod dhameystiran oo ka mid ah antiviruses waaweyn iyo software ammaanka. software The madax bannaan saaraysaa ururada aan sax ahayn oo ka mid ah faylasha eedeysanuhu oo wuxuu diyaariyaa qaladaadkii. RKill bandhigayaa liiska habka waxyeello la joojiyay intii uu socday howlgal software ah. software kaliya ee gabagabeynayo geedi waxyeello kuwaas oo si toos ah u bilaabay ka dib markii la xirey kadibna kombiyuutarka.
Gabagabeynayo geedi waxyeello
Bixisaa ururada qaybshay
howlgal buuxda iswada
Soo dejisan RKill
Faallo ku saabsan RKill
RKill Xirfadaha la xiriira